09/11/13 ~ Myanmar News Updates
Nan Thuzar ...
9:31:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
ဘာ့ကြောင့် ကားသော့အပိုတစ်ချောင်းကူးယူထားသင့်သလဲ … ?
9:15:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကစလို့ ကားသစ်များကိုဈေးနှုန်းသင့်တင့်စွာဖြင့်ဝယ်ယူလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကားမော်ဒယ်များမှာလဲ အမြင့်ပိုင်းသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီကားတွေမှာပါတဲ့ ကားသော့ တွေမှာ လုံခြုံရေး Chip ပါလာခဲ့တာကို ကားပိုင်ရှင်အတော်များများ မသိကြပါဘူး။ ဒီ Chip ပါတဲ့ကားသော့ကို အရင်ကားတွေလို ရိုးရိုးသော့မှာပဲ သော့မိတ္တူကူးပြီးကားကိုစက်နှိုးလို့မရဘူးဆိုတာကိုလဲမသိကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် (Transporter Chip Key) ပါဝင်တဲ့သော့အပိုတစ်ချောင်းကူးထားသင့်တဲ့အချက်တွေကိုပြောပြသွားမှာပါ။
ဘာ့ကြောင့် Transporter Chip Key ကိုအသုံးပြုပါသလဲ?
Transporter Chip Key ဆိုတာက ကားကိုအလွယ်တကူခိုးယူလို့မရအောင် လုံခြုံရေးအချက်အလက် ထည့်ထားတဲ့ သော့ကိုဆိုလိုတာပါ။ Transporader Chip Key Type (၂) မျိုးရှိပါတယ်။ Ignition Cylinder ထဲထည့်ပြီး နှိုးရတဲ့စနစ်နဲ့ နောက်တစ်မျိုးကတော့ Smart Key (Push Start) စနစ်ပါ။ ၂ မျိုးစလုံးကတော့ လုံခြုံရေးစနစ်တွေပါဝင် ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း ဥရောပအဆင့်မြင့်ကားတွေမှာတော့ Finger Print Sensor နဲ့ ကားပိုင်ရှင်ရဲ့ လက်ဗွေရာကို အသုံးပြုပြီးကားစက်ကိုနှိုးစေတဲ့စနစ်တွေပါဝင်လာပါပြီ။ ကိုယ့်ကားသော့မှာ Chip Key ပါ/မပါ အလွယ်တကူပဲ သိရှိနိုင်ပါတယ်။ ကားရဲ့အချက်အလက်ပြဒိုင်ကွက်မှာ Security Light ဆိုတာပါရှိပါတယ်။ ဒီမီးလေးက မိမိကားမှာ Transporter Chip Key ပါဝင်တယ်ဆိုတာအလွယ်တကူပဲသိရှိနိုင်ပါတယ်။ Chip မပါပဲသွေးထားတဲ့သော့ကို ကားသော့အိမ်ထဲထည့်ကြည့်လိုက်ပါ။ အဆိုပါမီးငြိမ်းသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကားစက်လဲနှိုးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ကားသော့မှ လုံခြုံရေးအချက်အလက်ကို ကားရဲ့ Immobilizer ECU ကမတွေ့ရှိလို့ပဲဖြစ် ပါတယ်။ Smart Key အမျိုးအစားသော့တွေကတော့ ကားထဲကို Smart Key ရောက်ရှိတာနဲ့ Security Light ကငြိမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Smart Key ကားထဲမရောက်ရှိနေခဲ့ဘူးဆိုရင် ကားကစက်နှိုးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ စနစ် (၂) မျိုးလုံးက ကားကိုအလွယ်တကူခိုးယူလို့မရအောင်ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Truck, Motorcycle များတွင် လည်း Transporter Chip Key ပါဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချောင်းတည်းပါတဲ့ကားသော့ ပျောက်သွားခဲ့လျှင်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲ? ဘယ်လိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမလဲ?
သင့်ကားရဲ့ Transporter Chip Key ပျောက်သွားခဲ့လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ပျက်စီးသွားလျှင်သော်လည်းကောင်း သင့်ကားကိုစက်နှိုးလို့ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအချိန်ကျရင် လုပ်ဆောင်ရမှာက ကားထဲမှာရှိတဲ့ Immobilizer ECU ထဲက Memory ကိုပြန်လည်ခေါ်ယူပြီး အသုံးပြုမဲ့ Key ထဲက Chip ထဲကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ဖို့ကကျွမ်းကျင်သော Locksmith တွေကပဲ Security Equipment တွေအသုံးပြုပြီးလုပ်ဆောင် လို့ရမှာပါ။ ဒီအခါကျရင် အပိုကုန်ကျစရိတ်တွေများပြားလာနိုင်ပါတယ်။ ရံဖန်ရံခါ ပစ္စည်းဝယ်မရခဲ့ရင် ပိုမိုကြာသွား နိုင်ပါတယ်။
ကားသော့အပိုတစ်ချောင်းကူးယူထားခဲ့လျှင်ဘယ်လိုအကျိုးတွေရှိလာနိုင်သလဲ? Remote ကိုရောကူးယူထားနိုင် သလား?
ကားသော့အပိုတစ်ချောင်းကူးယူထားခဲ့လျှင် Master Key ပျောက်သွားသည့်တိုင် ကားကိုစက်နှိုးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကုန်လဲသက်သာမှာဖြစ်သလို အချိန်ကုန်လဲသက်သာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Remote ကိုလဲကူးယူထားနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ Car Key ကိုအရင်ကူးယူထားသင့်ပါတယ်။ Master Key (Remote) ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရင် Copy Key နဲ့ကားစက်နှိုးပြီး Locksmith ဆီသွားပြီး Copy Remote ကို ပြန်လည် Memory သွင်းလို့ရပါတယ်။ Remote ကကုန်ကျစရိတ်များပါတယ်။ ဒါကြောင့်တကယ်လိုအပ်လာမှ ကူးယူနိုင်ပါတယ်။ Copy Key ကတော့ကြိုတင်ပြီး ကူးယူထားသင့်ပါတယ်။
တချို့ကားသော့ Chip Key မိတ္တူကူးယူလိုက်ကြတယ်။ အချိန်နည်းနည်းကြာသွားတော့ ပြန်သုံးကြည့်တယ် စက်နှိုးလို့မရဘူး? ဘာ့ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာပါလဲ?
Chip Key မိတ္တူကူးယူထားပြီး နှစ်အနည်းငယ်အကြာမှ ပြန်သုံးကြည့်တယ် ကားကစက်နှိုးလို့မရတော့ပါဘူး။ ဒီလိုဖြစ်ရတာကတော့ ဈေးသက်သာပြီး အရည်အသွေးနိမ့်တဲ့ Chip ကိုအသုံးပြုထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အသွေး ကောင်းတဲ့ Chip Key သုံးထားခဲ့ရင်တော့အခုလိုကြုံတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
Transporter Chip Key ပါတဲ့ကားသော့တိုင်း ကူးယူလို့ရပါသလား? Truck နဲ့ Motorcycle တွေမှာရောကူးလို့ရနိုင် သလား?
ဟုတ်ကဲ့၊ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မော်ဒယ်တူကားအမျိုးအစားမှာတောင် အသုံးပြုထားတဲ့ Chip ကမတူညီပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဘယ်အမျိုးအစားသုံးထားရတယ်ဆိုတာမျိုးကို အရင်သိပြီးမှ အသုံးပြုတဲ့စက်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပြီး ကူးယူနိုင်ပါတယ်။ Truck နဲ့ Motorcycle တွေမှာပါတဲ့ Chip Key တွေကိုလဲကူးယူထားနိုင်ပါတယ်။
Remote မပါပဲ Chip Key တစ်ချောင်းကူးထားခဲ့ရင် ဘယ်လောက်ကုန်ကျနိုင်ပြီးတော့၊ ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူး ရရှိနိုင်မလဲ? Remote ကိုရောတပါတည်းကူးယူထားရင် ဘယ်လောက်ကုန်ကျနိုင်မလဲ?
Remote မပါတဲ့ Chip Key မိတ္တူတစ်ချောင်းကို အသုံးပြုပေးရမယ့် Chip ပေါ်မူတည်ပြီး (၁) သိန်းမှ (၁.၅) သိန်း ကြားကုန်ကျနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုကူးယူထားလိုက်ခြင်းအားဖြင့် Master Key မတော်တဆပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရင် အရေးပေါ်အခြေအနေအဖြစ် Copy Key ကိုအသုံးပြုပြီးကားကို ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Remote ကိုလဲတပါတည်းကူးယူထားနိုင်ပါတယ်။ Remote ကူးယူခြင်းကတော့ (၂) သိန်းအထက်ကိုကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကား သော့မိတ္တူကူးယူတော့မယ်ဆိုရင် ကား ယူလာဖို့လိုအပ်ပါသလား? (သို့မဟုတ်) ကားသော့ချည်းပဲယူလာ လို့ကောရနိုင်မလား?
ကားသော့မိတ္တူကူးယူတော့မယ်ဆိုလျှင် ကားသော့မှာအသုံးပြုထားတဲ့ Chip ရဲ့ ID ကိုသိဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလိုသိဖို့အတွက် Car Chip Key Copy Machine ကိုအသုံးပြုပြီး ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ID ပေါ်မူတည်ပြီး ကားယူ လာဖို့လိုအပ်တဲ့ကားရှိနိုင်သလို၊ ကားယူလာဖို့မလိုအပ်တဲ့ကားလဲရှိပါတယ်။
Aung Automobile Service အနေနဲ့ Transporter Chip Key များကို US မှပစ္စည်းများမှာယူပြီး အာမခံချက်ဖြင့် ကူးယူပေးနေပါတယ်။ Chip တွေက USA Made ဖြစ်တာကြောင့်အရည်အသွေးစိတ်ချရပါတယ်။ Key Shell ကတော့ Mexico နဲ့ Spain ကထုတ်လုပ်တဲ့ Key Shell များကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပေးနေတဲ့ USA နိုင်ငံလုပ်စက်က (၈၅%) သော ကား၊ ထရပ်ကား၊ ဆိုင်ကယ် များရဲ့သော့များကို ကူးယူပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဆီလာရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ မိမိကားရဲ့ Chip Key ဘယ်အမျိုးအစားသုံးတယ်ဆိုတာကို (အခမဲ့) လာရောက် စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ Copy ကူးယူချင်တယ်ဆို လဲဘယ်လောက်ကျသင့်တယ်မေးမြန်းနိင်ပါတယ်။
၁၇ နှစ်သမီးကို အသက် ၃၀ ကျော် အိမ်နီးချင်းက ခိုးပြေးသဖြင့် အမှုဖွင့်
10:17:00 AM Myanmar Newsupdates No comments
၁၇ နှစ်အရွယ်သာ ရှိသေးသည့် မိန်းကလေးငယ်ကို အသက် ၃၄ နှစ်အရွယ် အိမ်နီးချင်းအမျိုးသားက ခိုးပြေးသည် ဟု ဆိုကာ အမှုဖွင့်တိုင်တန်းမှုတစ်ခုအား ကွမ်းခြံကုန်းရဲစခန်းက စက်တင်ဘာ ၈ ရက်တွင် အမှုဖွင့် ဆောင်ရွက်ပေး နေရသည်ဟု တိုင်းရဲဌာနမှ သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
အဆိုပါအမှုမှာ စက်တင်ဘာ ၄ ရက်ကတည်းက ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် မေတ္တာကျေးရွာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ယခုမှမိန်းကလေး၏ အုပ်ထိန်းသူ အဒေါ်ဖြစ်သူက အမှုဖွင့်လိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
တိုင်တန်းသူက တူမတော်စပ်သည့် မ....... (၁၇)နှစ်အား နေအိမ်အောက်ထပ်တွင် ထင်းများ စီးခိုင်းထားရာတွင် ည ၉ နာရီအချိန်ထိ အိမ်ပေါ်သို့ တက်လာခြင်းမရှိဘဲ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်း ရဲကို ထွက်ဆိုထားသည်။
ထို့ကြောင့် လိုက်လံစုံစမ်းရာတွင် အိမ်နီးချင်းဖြစ်သူ အမျိုးသားတစ်ဦးက ခိုးယူထွက်ပြေးသွားကြောင်း စုံစမ်းသိရှိခဲ့ ရသည်ဟုလည်း ဆက်လက်ထွက်ဆိုထားသည်။
ထိုသို့ တိုင်တန်းမှုကြောင့် ရဲစခန်းကအမှုအမှတ် (ပ)၁၈၃/၂၀၁၃ဖြင့် အမှုဖွင့်ကာ စွပ်စွဲခံထားရသူအား ဖမ်းဆိးရမိပါ က ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ပုဒ်မ ၃၆၆ ဖြင့် တရားစွဲမည်ဟု ရဲဌာနကဆိုသည်။
ဗိုက်ပူ၊ နွမ်းလျ၊ ခါးနာစတဲ့ လက္ခဏာရပ်တွေဟာ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ လက္ခဏာရပ်တွေ ဖြစ်တာကြောင့် ကျွန်မတို့ဟာ သိပ်ပြီး အလေးမထားဘဲ လျစ်လျူရှုထားတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလက္ခဏာရပ်တွေက ကျွန်မတို့ ထင်သလောက် အန္တရာယ်မကင်းတာကြောင့် -လျစ်လျူရှုမထားသင့်ပါဘူး။
မန္တလေးမြို့၌ ဆီးဂိမ်းတွင် လာရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည့် နိုင်ငံတကာ ဘောလုံးအသင်းများ နှင့် မီဒီယာများ တည်းခိုရန် ဟိုတယ်များ စီစဉ်
10:03:00 AM Myanmar Newsupdates No comments
ရန်ကုန် ၊ ၁၁-၉-၂၀၁၃
မန္တလေးမြို့တွင် အရှေ့တောင် အာရှ အားကစား ပြိုင်ပွဲ၌ လာရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည့် နိုင်ငံခြား ဘောလုံးအသင်း ၇ သင်းအတွက် ဟိုတယ် ၅ လုံး နှင့် မီဒီယာများ တည်းခိုရန် အတွက် ဟိုတယ် ၃ လုံး စီစဉ် ထားကြောင်း သိရသည်။
လာရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည့် ဘောလုံး အသင်းသားများ တည်းခိုရန် အတွက် Mandalay Hill Resort Hotel, Hotel Mandalay, Hotel Queen, ဂရိတ်ဝေါလ် ၊ မင်းသားကြီး နှင့် ရွှေဖြူ ဟိုတယ် များ စီစဉ်ထားပြီး မီဒီယာ နှင့် အထူး ဖိတ်ကြား ထားသူများ အတွက် Sedona Hotel Mandalay, Pacific Hotel များကို စီစဉ် ထားကြောင်း သိရသည်။
ထို့အပြင် နိုင်ငံတကာ မှ လိုက်ပါ ကြည့်ရှုမည့် ၀ါသနာရှင် များနှင့် လေ့လာသူများ အတွက် ကိုလည်း ဟိုတယ် ၅ လုံး စီစဉ်ထားပြီး အရန် ဟိုတယ် ၆ လုံး ကိုလည်း စီစဉ် ထားကြောင်း ၊ ဟိုတယ် တစ်ခုစီတွင် အခန်း ၁၅ ခန်းနှုန်း စီစဉ်ထားကာ လာရောက် ကြည့်ရှု သူများ တည်းခိုမှု အခက်အခဲ မဖြစ်စေရန် ပြုလုပ် ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး ဟိုတယ် နှင့် ခရီးသွားလာရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန မှ သိရသည်။
လက်ရှိ အချိန်တွင် ဆီးဂိမ်း ပြိုင်ပွဲအတွက် ပြည်ပမှ လာရောက်ကြမည့် မီဒီယာများ နှင့် လေ့လာသူ များ တည်းခိုရန် အခန်းပေါင်း ၃၅၈ ခန်း ၊ အားပေးမည့် ပရိသတ်များ အတွက် အခန်းပေါင်း ၇၀၀ ကို ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပမည့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး ၊ နေပြည်တော် နှင့် ငွေဆောင် မှ ဟိုတယ်များတွင် စီစဉ် ထားကြောင်း ၊ ယင်းတည်းခိုရန် အခန်းများကို အွန်လိုင်း မှ တစ်ဆင့် ကြိုတင် မှာယူနိုင်ပြီး စက်တင်ဘာလ ၃၁ ရက် မတိုင်မီ စာရင်း ပေးသွင်းနိုင်ကြောင်း ဟိုတယ် နှင့် ခရီးသွားလာရေး ၀န်ကြီးဌာန မှ သိရသည်။
ပြည်ပမှ လာရောက် ကြည့်ရှုကြမည့် ပရိသတ် များကို ပြိုင်ပွဲရက် များအတွင်း အဆင်ပြေစွာ တည်းခို နိုင်ရန် အတွက် သတ်မှတ် ထားသော အခန်းပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး အခန်းခများ အဖြစ် နေပြည်တော် တွင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၇၀ ၊ ရန်ကုန်တွင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၅၀ ၊ မန္တလေး နှင့် ငွေဆောင် တို့တွင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၀၀ အဖြစ် သတ်မှတ် ထားရာ စာရင်း ပေးသွင်း ရမည့်ရက် ကျော်လွန် သွားပါက လျှော့ပေါ့ သတ်မှတ် ထားသော အခန်းခ နှုန်းဖြင့် တည်းခို နိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း ယခင် မူလ ဈေးနှုန်းဖြင့်သာ တည်းခို ရမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ခဲမဖြူနှင့် အဖြိုက်နက် အများဆုံးကို တနသာင်္ရီတိုင်းဒေသကြီးမှထွက်ရှိနေ
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ထားဝယ်၊ ပလောနှင့် ရေဖြူ ဒေသများသည် ခဲမဖြူနှင့်အဖြိုက်နက်များ ထွက်ရှိနိုင်ကြောင်း သတ္တုတွင်း ၀န်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံသည် ခဲမဖြူ၊
အဖြိုက်နက် ကီလို ၆၀၀ ဝန်းကျင် ရှိသောကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၁၆၀၀ကီလို ရပ်ဝန်းတွင်လည်း အများဆုံးထွက်ရှိရာ ဒေသကြီးတစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း ဘူမိဗေဒပညာရှင် အချို့က ပြောကြသည်။
“တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီးထဲမှာ ခဲမဖြူနဲ့ အဖြိုက်နက်ရပ်ဝန်း ကီလို ၆၀၀ လောက်ရှိတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာတောင် ခဲမဖြူနဲ့ အဖြိုက်နက် ရပ်ဝန်း ကီလို ၁၆၀၀ လောက်ပဲရှိတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုတနင်္သာရီတိုင်းက ထွက်ရှိနေတာ”ဟု ထားဝယ် အထူးစီးပွားရေးဇုန် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးသောင်းလွင်က ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ထားဝယ်ရေနက် ဆိပ်ကမ်းနှင့် ဆက်စပ် လုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ကိုင်လျက် ရှိရာ သတ္တုတူးဖော် ရှာဖွေရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ဆောက်ရွက် လာခဲ့ပါက တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ ဒေသခံ ပြည်သူလူထုများအား အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိလာစေရန် ကူညီသွားမည်ဟုလည်း သိရသည်။
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ စာရင်းဇယားများအရ လူဦးရေ ၁၃သိန်း ၀န်းကျင်ခန့ရှိပြီး ယင်းအထဲမှ လူဦးရေ ၅ သိန်းခန့်ဝန်းကျင်မှာထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင် နေရကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိတွင် သတ္တုတွင်းဝန်ကြီး ဌာနနှင့် ဂျပန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ပူးပေါင်းကာ သတ္တုများ ဆက်လက်ရှာဖွေနိုင်ရန် လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း ယင်းလေ့လာမှု အောင်မြင်ပါကလည်း ဒေသခံများအတွက် အလုပ်ကိုင်များ တိုးတက် ဖန်တီး ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သူရဦးသောင်းလွင်က ဆက်လက် ပြောကြားလိုက်သည်။
10:02:00 AM Myanmar Newsupdates No comments
အမျိုးသမီးငယ်လေး ၁ ဦး သေစေလောက်တဲ့ အထိ လူအစုလိုက်အပြုံလိုက် အဓမ္မကျင့်သူ အမျိုးသား ၄ ဦး အပြစ်ရှိကြောင်း အိန္ဒိယတရားရုံး ဆုံးဖြတ်
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ဘက်စ်ကားပေါ်မှာ အမျိုးသမီးငယ်လေး ၁ ဦး သေစေလောက်တဲ့ အထိ လူအစုလိုက်အပြုံလိုက် အဓမ္မကျင့်တဲ့အမှုမှာ အမျိုးသား ၄ ဦးကို အပြစ်ရှိကြောင်း အိန္ဒိယတရားရုံးက ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
နယူးဒေလီ တရားရုံးက တရားသူကြီးတွေကနေပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဒီကနေ့ အင်္ဂါနေ့မှာ ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီး ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ တရားခံအမျိုးသားတွေကို ကြိုးပေးကွပ်မျက်နိုင်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။
သေဆုံးသူ အသက်၂၃ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလတုန်းက သံတုတ်နဲ့ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်ခဲ့တာပါ။ သူနဲ့အတူပါလာတဲ့ အမျိုးသားအဖော်ကိုလည်း ရိုက်နှက်ခဲ့ပါတယ်။
အဓမ္မပြုကျင့်ပြီး နှစ်ပတ်ကြာတဲ့နောက်မှာတော့ အမျိုးသမီးငယ်လေးဟာ သူဆေးကုသမှုခံယူတဲ့ စင်္ကာပူဆေးရုံမှာ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ကုသိုလ်အလုပ်များ တားမိရင် သတိထားဖွယ်ရာ ကုသိုလ်အလုပ်များ တားမိရင်
9:55:00 AM Myanmar Newsupdates No comments
ကုသိုလ်လုပ်တာများ.. ဘာလို့တားရမှာလဲ.. မတားပါဘူးလို့ ပြောကြမယ် ထင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကျတော့လည်း.. သူတစ်ပါးလုပ်နေတဲ့ ကုသိုလ်အလုပ်
ကို သိသိကြီးနဲ့ မလုပ်ဖြစ်အောင် တားဆီးကြတာရှိသလို.. မသိလို့ တားမိသ
လို ဖြစ်သွားတာတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေအများစုဟာ မိသားစုရဲ့ အဝေးမှာရောက်ရှိနေပြီး အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ပေါင်းစုနေထိုင်
ရတဲ့အတွက် ပိုပြီးတော့ သတိထားသင့်ပါတယ်..။
ကိုယ့်ကုသိုလ်အလုပ်ကို ကိုယ်တိုင်မလုပ်တာဟာ ဘာမှမဖြစ်ပေမယ့်.. သူတစ်ပါးလုပ်နေတဲ့ ကုသိုလ်ကို တားမိသလို ဖြစ်သွားတာကျတော့ အင်မတန်မှ ဆိုးရွားပါတယ်နော်..။ ဒါမလို့လည်း မဖြစ်မိအောင် ဆင်
မထင်မှတ်တဲ့ အသေးအဖွဲ အရာလေးတွေဟာ သတိမထားလိုက်မိတဲ့အခါ
မှာ သူတစ်ပါးရဲ့ ကုသိုလ်အလုပ်တွေ တားမိတတ်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အတူနေသူငယ်ချင်းတွေ ရှိတဲ့အခါ ပိုပြီးသတိထားသင့်တဲ့ အရာလေးပါ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် တရားခွေလေးဖွင့်ပြီး နာကြားနှလုံးသွင်းနေတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်က ကက်ဆက်အကျယ်ကြီး ထဖွင့်လိုက်တာတို့.. အော်
ဟစ်ဆူညံစွာ ပြောဆိုနေတာတွေဟာ.. တကယ်တော့ သူတစ်ပါးလုပ်နေ
တဲ့ ကုသိုလ်အလုပ်တွေကို တားရာရောက်ပါတယ်။
သူတစ်ပါး တရားနာကြားနှလုံးသွင်းနေတဲ့ အချိန်မှာ သူတစ်ပါးကို စိတ်အ
နှောက်ယှက်ဖြစ်အောင် လုပ်လိုက်တာဟာ သူရရှိမဲ့ မဂ်ဥာဏ်ဖိုလ်ဥာဏ်
တရားတွေကို မရရှိအောင် တားလိုက်သလို ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်အချိန်မှာ တရားရမယ်.. ဘယ်အချိန်မှာ တရားမရဘူးဆိုတာ ကြိုတင်မသိနိုင်တဲ့အတွက် ဘယ်အချိန်မဆို သူတစ်ပါးရဲ့ ကုသိုလ်အလုပ်တွေကို မတားမိစေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
သူတစ်ပါးရဲ့ ကုသိုလ်ကို နှောက်ယှက်ခဲ့တဲ့ကံတွေဟာကိုယ့်အလှည့်ကျရင်
လည်း တရားအားထုတ်လို့ တရားရတော့မယ့်အချိန်မှာ အနှောက်အယှက် အဖျက်အစီးတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒ့ါကြောင့်မလို့လည်း သတိ
နောက်တစ်ချက်ကတော့ သူတစ်ပါးတွေရဲ့ ဒါနကုသိုလ်တွေကို တားမိ
တဲ့ အတွက် နောက်ဘ၀ရောက်တဲ့အခါမှာ ပါးစပ်ပေါက်မပါတဲ့ပြိတ္တာ
ဖြစ်သွားရတဲ့ အကြောင်းအရာလေးပါ။ နှမြောတွန့်တိုတဲ့သူတွေ သတိ
ထားရမယ့် အကြောင်းအရာလေးပါပဲ။ အဖွားကြီးတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်တိုင်အလှူဒါနမပြုသလို သူရဲ့ မြေးတွေ သားတွေသမီးတွေ
လှူရင်လည်း မလှူဖို့ အမြဲတားတတ်ပါတယ်။
အဲ့လိုမျိုး သူတစ်ပါးအလှူကို တားတဲ့အတွက် သေလွန်တဲ့အခါမှ သူ့မှာ
ရှိတဲ့ ဥစ္စာပစ္စည်းတွေ စွဲလမ်းပြီးသေလွန်တဲ့ အတွက် ပြိတ္တာဖြစ်ရပါတယ်။ ပြိတ္တာဖြစ်ယုံတင် မဟုတ်ပါဘူး.. သူတစ်ပါးလှူမယ့် အလှူဒါနကို တားစီး
ခဲ့တဲ့ကံကြောင့်လည်း ပါးစပ်ပေါက်မပါတဲ့ ပြိတ္တာဖြစ်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ ဘယ်
သူက အမျှဝေေ၀ သာဓုခေါ်ခွင့်မရတဲ့ အခြေအနေဖြစ်သွားရတာပါ။
ဒီအကြောင်းအရာလေးဟာ တကယ်တော့ သူတစ်ပါးရဲ့ အလှူကို မလှူဖြစ်အောင်.. သူတစ်ပါးလုပ်နေတဲ့ ကုသိုလ်အလုပ်ကို မလုပ်ဖြစ်
အောင် တားခဲ့တဲ့အတွက် ပြန်လည်ပေးဆပ်ရတဲ့ အကြောင်းအရာလေး
ပါ။ ဒီဖြစ်ရပ်မှန်အကြောင်းအရာလေးဟာ လူတိုင်း သတိထားသင့်တဲ့ အရာလေးပါပဲ။
နောက်တစ်ချက်ကတော့.. သူတစ်ပါးရဲ့ ကုသိုလ်ပြုခွင့်ကို တားခဲ့တဲ့အတွက်.. ရဟန်းဘောင်မှာ ကြုံတွေ့ခံစားရတဲ့ အကြောင်းအရာလေးပါ။ ယခုမျက်
လူတစ်ယောက်ဟာ သာသနာ့ဘောင် ၀င်ရောက်ဖို့ ရဟန်းခံပြီး သင်္ကန်းဝတ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ ခဏတာပဲ သင်္ကန်းဝတ်ခွင့်ရပြီး ကြာလာတဲ့အခါမှာ သင်္ကန်းဝတ်ရင်း ခန္ဓာကိုယ်တွေ ပူချစ်လာပြီး သင်္ကန်းဝတ်မရဖြစ်တာ.. သူတစ်ပါးထဲအတွက် ဆွမ်းဟင်းတွေ
ဟာ မကောင်းတဲ့ အနံ့အသက်တွေ ထွက်နေပြီး ဆွမ်ဘုန်းပေး
လို့မရ ဖြစ်တာတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။
ရဟန်းဝတ်ချင်ပေမယ့် ရဟန်းဝတ်ခွင့်မရတာဟာ အရင်ဘ၀က သူတစ်ပါးရဲ့ ရဟန်းပြုခွင့်ကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့ အတွက်ပါ။ ဒီအကြောင်းအရာလေးဟာ အင်မတန် သတိထားသင့်ပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာလေးဟာ.. ယခုခေတ် မိဘတွေအတွက် သတိထားစရာ အချက်လေးပါ။ ယခုခေတ် ရဟန်းဘောင် ၀င်ရောက်ချင်တဲ့ လူငယ်တွေ သတိထားပြောသင့်တဲ့ အရာလေးပါ။ ရဟန်းဘောင်ဝင်မယ်ဆို မိဘတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရမှ ၀င်လို့ရတာပါ။
ဒီတော့.. မိဘတွေကို အရင်ဆုံး ခွင့်တောင်းမှဖြစ်ပါမယ်။ ဒီလိုခွင့်တောင်း
တဲ့အခါမှာ မိဘတွေက အတင်းတားမယ်.. မ၀င်ပါနဲ့လို့ ပြောမယ်ဆိုရင်.. ဒါဟာ သူတစ်ပါးရဲ့ မဂ်ဥာဏ်ဖိုလ်ဥာဏ်ရမယ့် အခွင့်အရေးတွေ.. တရား
ထူးရမယ့် အခွင့်အရေးတွေကို တားဆီးရာ ရောက်ပါတယ်။ သူတစ်ပါးရဲ့ ရဟန်းပြုခွင့်ကို တားတာဖြစ်တဲ့အတွက် တားမိတဲ့သူတွေဟာ..နောက်ဘ
၀ရောက်ရင် သင်္ကန်းဝတ်ခွင့်.. ရဟန်းဝတ်ခွင့် ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တော့
ပါဘူး.. ဒါ့ကြောင့် ဒီအချက်လေးကို အထူးမှာလိုပါတယ်။
လူငယ်တွေဘက်ကလည်း ကိုယ်ဖြစ်ချင် ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေကို
ကြီးမကြည့်ပဲနဲ့ မိဘတွေ သဘောတူမတူကို အရင်စဉ်းစားပြီး ပြောဆို
လုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့ အကြံပေးလိုပါတယ်..။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် ကိုယ့်အပေါ်မူတည်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေပါ နောက်ဘ၀တွေကျရင် ရဟန်းခံခွင့် ရဟန်းဝတ်ခွင့်မရ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်း
အရာလေးကို လူငယ်တွေရော လူကြီးတွေရော အထူးအလေးနက်
အဓိကအနေနဲ့ပြောလိုတာကတော့ သူတစ်ပါးရဲ့ ကုသိုလ်လုပ်ခွင့်ကို မတားမိစေဖို့ကို ပြောလိုတာပါ။ အမှတ်တမဲ့ သတိလက်လွတ်ပြောလိုက်
တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေဟာ သူတစ်ပါးအတွက် ကုသိုလ်လုပ်ခွင့်ကို တားသလိုဖြစ်သွားရင် ကိုယ့်အတွက် တရားရခွင့်တွေကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လိုက်လံတားဆီးပြစ်ရာ ရောက်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့်လည်း ဘယ်စကားပဲပြောပြောဘာအလုပ်ပဲလုပ်လုပ် သတိလေး
နဲ့ အမှားမပါအောင်.. သူတစ်ပါးရဲ့ ကုသိုလ်လုပ်ခွင့်တွေ မတားဖြစ်အောင်
ပြောဆိုလုပ်ကိုင်စေလိုတာပါ။ ကိုယ်ကိုတိုင် ကုသိုလ်တွေ လုပ်နေယုံနဲ့ မပြီးသေးပါဘူး.. ကိုယ့်ကြောင့်လည်း သူများတွေမှာ ကုသိုလ်တွေ လုပ်
ခွင့်ရအောင်.. အကုသိုလ်တွေ ပယ်ဖျောက်ခွင့်ရအောင် လုပ်ဆောင်ပေး
သူများတွေရဲ့ ကုသိုလ်တရားတွေကို မပိတ်ပင် မတားဆီးမိအောင် သတိထားလုပ်ကိုင်နိုင်ပြီးတော့ ကိုယ်တိုင်လည်း တရားထူးတရားမြတ်
ရရှိအောင် ကျင့်ကြံလုပ်ကိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြု ဆုတောင်းလိုက်ပါ
စာဖတ်သူအားလုံး သက်ရှည်ကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာပြီး လိုရာဆန္ဒများတစ်လုံး
ဘာ့ကြောင့် ကားသော့အပိုတစ်ချောင်းကူးယူထားသင့်သလဲ … ...
မန္တလေးမြို့၌ ဆီးဂိမ်းတွင် လာရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည့် န...
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ခဲမဖြူနှင့် အဖြိုက်နက် အများဆုံးကို တန...
အမျိုးသမီးငယ်လေး ၁ ဦး သေစေလောက်တဲ့ အထိ လူအစုလိုက်...
ကုသိုလ်အလုပ်များ တားမိရင် သတိထားဖွယ်ရာ ကုသိုလ်အလုပ...